Masuuliyiinta federaalka Itoobiya iyo maamulka Soomaalida oo uu khilaaf soo kala dhexgalay - Halbeeg News
Bidix Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar, Dhexda Raiisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, Midig Axmed Shide, Guddoomiyaha Xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Soomaalida, Xuquuqda Sawirka: The Somali Star
JIG JIGA (HALBEEG)- Wararka laga helayo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in khilaaf siyaasadeed uu ka dhex taaganyahay madaxda maamulka deegaanka iyo kuwa federaalka ah.
Khilaafka haatan taagan ayaa la sheegayaa in uu salka ku hayo xal u helidda colaadaha soo noq noqday ee u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
Ilo kale oo xog ogaal ah ayaa iyana ku warramaya in khilaafka iyo ismaandhaafka uu ku saleysanyahay waxa laga yeelayo xubno iyo saraakiil sar sare oo horay ula soo shaqeeyay maamulkii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar ee deegaanka ka talinayay walina ka tirsan maamulka cusub ee uu hoggaamiyo Mustafe Muxumed Cumar .
Wararka ayaa sheegaya in uu ka biyo diiddanyahay la shaqeynta saraakishaas isaga oo dalbaday in raggan la marsiiyo caddaaladda maadaama ay ka tirsanaayeen maamul ku eedeysan in uu gobolka ka geystay gaboodfallo taasoo ay dowladda dhexe ay kasoo horjeesatay.
Sidoo kale waxuu khilaaf xooggan ka dhex ooganyahay wasiirka maaliyadda dowldda Itoobiya ahna guddoomiyaha xisbiga Soomaalida Itoobiya, Axmed Shidde oo ka mid ragga ka tirsanaa maamulkii hore ee deegaanka ka talinaayay iyo Madaxweynaha dowladda gobolka Soomaalida Itoobiya, Mustafe Muxumed Cumar.
Axmed Shidde ayaa xusul duub ugu jira sidii sarakiishaas hore ay uga sii mid ahaan lahaayeen maamulka cusub iyada oo aan wax daalac dib loogu raacaneynin.
Madaxweynaha deegaanka ayaa dhowr jeer socdaal ku tagay xarunta Itoobiya ee Addis Ababa, halkaas oo uu kulamo kula yeeshay madaxda sar sare ee dalka.
Warar hoose oo aan la xaqiijinin ayaa tilmaamaya in madaxweyne Mustaf dhowr jeer lagu cadaadiyay in uu xilka banneeyo maadama aragti ahaan ay aad u kala fog yihiin isaga iyo dowladda dhexe.
Dhanka kale, warsaxafadeed uu soo saaray ururka ONLF ayaa lagu sheegay gobolka Soomaalida Itoobiya uu u madax bannaan yahay ka go’aan gaarista arrimihiisa siyaasadeed sida uu qabo dastuurka Itoobiya.
Ururka ayaa ugu baaqay xisbiga talada haya iyo dowladda dhexe in ay ixtiraamaan rabitaanka iyo sharafta dadka deegaanka kana fogaadaan wax walba oo abuuri kara xasilooni darro ka dhacda gobolka waxayna intaas sii raaciyeen in kala aragti duwanaasahaha siyaasadeed loo xalliyo si hufan iyada oo laga talagelinayo dhinacyada ay khuseyso.
Madaxweyne Mustafe Cagjar oo bartimihii sanadkii hore loo doortay xilka ayaa wajahaya caqabado fara badan oo dhanka maamulka iyo xariirka deegaanku uu la leeyahay dowladda federaalka Itoobiya.
Ra'iisul wasaare Khayre oo la kulmay safiirrada Midawga Yurub ee Soomaaliya